Chena Cake Recipe Kubva Mukutanga (Nyoro uye Fluffy) - Cake
Ingori yakanakisa chena keke recipe yakagadzirwa kubva pakutanga
Iyi chena keke recipe ndiyo yakasarudzika chena chena keke. Chiedza uye chinopisa, chinyoro uye chizere nekuravira. Kune joke munyika yekeke kuti chena hachisi chinwiwa, chaicho chiri keke revanilla . Asi keke jena haringori chena chete. Ngatinyurirei mune izvo zvinogadzira iyo yakanaka, yakachena chena keke recipe.
Muchena Wemuchato Keke Recipe
White keke mapapiro kwaakambogadzirirwa michato. Vapfumi chete ndivo vaikwanisa kutenga hupfu chena neshuga saka keke jena raionekwa sechiratidzo chepfuma yako. Mazuva ano, keke chena ine yakanaka, yakanyorova crumb ndiyo ingangove yakajairika keke keke yakabikwa kune ese marudzi ezviitiko.
Sezvineiwo, kwandinobva (Portland, Oregon) izvo zvakanyanya organic uye zvishoma zvakanatswa zvigadzirwa zvako, zvinodhura ivo. Zvinonakidza kuti zvinhu zvinowanzoenda kuzere-denderedzwa.
Ndeupi Musiyano uripo Pakati Pechena Cake Recipe Uye Yero Cake Recipe?
Vanhu vazhinji vanovhiringidza machena macake mapepa ne keke yeyero kana kunyange keke revanilla . Kunyangwe zvakafanana, izvi chaizvo zvakasiyana zvachose mhando dzemakeke. Kunyanya kuita nemabatirwo emazai aya. Mucheka wekeke jena unongoshandisa avo vachena vezai, dzimwe nguva vanorohwa uye vozopetwa mubatter, dzimwe nguva vanowedzerwa zvakananga kumusanganiswa webhotoro / shuga. Keke reVanilla rinoshandisa ese mazai machena uye mazai emazai (kazhinji) uye zvinoguma mune keke diki-chena rine ruvara asi mumaonero angu rine yakanyanya kunaka. Keke yeyero inogadzirwa nemazai emazai chete saka iyo batter ine yakafuma kwazvo uye yegoridhe ruvara ine yakawanda yekuravira uye iri yakanyorova keke.
Vanilla uye chena keke mapepa ese ari maviri anoshandiswa mune akawanda akasiyana mapapiro sehwaro nekutsiva zvinonhuwira kana zvinowedzerwa. Yeke keke yakajairwa kubatanidzwa nevapfumi chokoreti buttercream kana ganache uye haigare ichishandiswa seyepepuru yekumusoro yeamwe mafirivhi kunyangwe zvaigona kuve zvakadaro.
Zvakare, vanhu vanoseka uye vachiti 'chena' uye 'yero' hachisi chinwiwa asi kuita odha ye 'ese zai yolk keke' haina chete mhete imwechete kwairi. Iyo ingori nzira yekutsanangudza keke saka tese tiri papeji imwechete.
Unogadzira Sei Keke Chena?
Kuti ugadzire yakanakisa chena keke recipe nguva dzose, unofanirwa kuona kuti uri kushandisa izvo zvakanaka zvigadzirwa. Kune ino resipi isu tiri kushandisa AP hupfu nekuti ndiyo inonyanya kuita mabasa akawanda. Tiri kushandisa futi yemhando yepamusoro isina kana dhayi rekugadzira mukati maro (waiziva here kuti mamwe makambani anodhaya bhotela ravo kuti riwedzere kuita yero? Chinyakare chena keke inoshandisa almond dhisiki inoitika kuti ive zvakare yakajeka. Ikozvino, ini pachangu handidi kuravira kwechibodzwa chemaarumondi saka ini ndinosarudza kushandisa vanilla bhinzi paste uye vanilla mushoma.
ASI Mirira! Iwe wati izvo zvigadzirwa zvaifanira kunge zvakajeka!
Chokwadi, ndakataura izvozvo asi pano tasvika pane imwe yeiyo 'kuravira pamusoro pevara' mitemo iri mubhuku rangu. Iko hakuna yakawanda yezvisanganiswa mune ino kamukira inounza kunhuvira patafura asi mhando yeinobvisa iri # 1. Vanilla bhinzi unama uye dhonza ICHINOSIMBIRA zvishoma batter kuti irege kuva YAKachena chena asi kwandiri, ini ndoda kuva nazvo pane kusava nekunhuvira zvachose. Kana iwe zvachose uchifanira kuve nemuchena chena saka inzwa wakasununguka kutsemura hafu yevanilla mune ino kamukira uye wedzera 1/2 tsp yearumondi yakabviswa.
Chimwe chikonzero iwe ungangoda kushandisa almond dhisiki kana iwe unogona kunyange kushandisa yakajeka vanilla (kutevedzera) kubvisa ndeyekuti iwe uri kushandisa ino chena keke recipe sechigadziko cheimwe keke recipe senge yangu Strawberry keke uko ruvara rwakakosha chaizvo. Iyo yakachenesa iyo batter yekeke, iyo truer iyo vara ichave mushure mekuwedzera mavara.
Nei Pane Mafuta MuYiki Cheka Recipe?
Chinhu chinonakidza, patinoruma mukeke, zvimwe zvinhu zvinoita kuti tifunge 'YUM!' Unaku, hwema uye hunyoro. Texture rinowanikwa nenzira dzakakodzera dzekuvhenganisa, kuravira kunowanikwa nezvakakwira zvemhando yepamusoro asi hunyoro chinhu chinonyengera. Iwe haugone kungorasira hunyoro huzhinji mukeke rako remakeke kana kuti unozopedzisira uine gummy mess. Chinhu chimwe chinoita kuti huropi hwako hunofunga 'hunyoro' ndiko kuwedzerwa kwemafuta mashoma. Ini handidi kuwedzera zvakawandisa, nezve ounce ichaita. Ndinosarudza kushandisa mafuta emiriwo nekuti haina hwema uye haina ruvara.
Kana iwe usiri kuda kushandisa oiri yemafuta iwe unogona kushandisa chero imwe yakapfava yakasanganiswa mafuta.
chinotsiva chiDutch maitiro cocoa upfu
Unofanirwa Kuisa Sour Cream Mune Chena Keke?
Nguva refu yapfuura (hatisi kuzotaura nezvekuti yakareba sei) ndinorangarira ndichiverenga mu maforamu ekeke nezve iyi yemashiripiti chena keke recipe inonzi WASC keke ayo ese akashongedza makeke akashandiswa. Ndakanga ndisingazive kuti chaive chii asi ndaida kwazvo kuziva! Munguva pfupi, ndakaziva kuti WASC yakamirira White Almond Sour Cream keke uye chekutanga chigadziriso chena bhokisi keke musanganiswa.
Ikozvino, ini handina kana chinhu chinopesana nemunhu chero upi zvake anoshandisa mabhokisi akasanganiswa kana madhokotera akaunganidzwa musanganiswa. Zverwendo rwangu rwega semushongedzi wekeke, ini ndanga ndichitsvaga kuti ndigadzire mabikirwo angu aizoita kuti ndionekwe. Chero ani zvake anogona kurova musanganiswa webhokisi asi zvadaro zvinongonaka sekeke remumwe munhu. Iwe unoona zvandiri kutaura?
Saka nei ungashandisa iyi mhando yechena keke keke? Zvakanaka kwete munhu wese anokanda chingwa kana anoda kuve. Kana kuti pamwe ivo vanongoda yekukurumidza uye yakapusa keke recipe iyo ichave yechokwadi kubuda. Iyi yekubheka ndeyechokwadi yekusa-kukundikana uye ndizvo zvaungadaidze kuti 'rakagadziriswa bhokisi musanganiswa'. Iko kuwedzerwa kwekirimu yakasviba nemazai kunoita kuti iwedzere kunakidza uye kunyorova. Izvo zvakare zvinokanganisa kubva kune iyo 'kemikari' kuravira iyo yakawanda yemabhokisi musanganiswa ine.
Ndingakurudzira here kuti uite izvi panzvimbo pekutanga musanganiswa? Zvakanaka chaizvo zviri kwauri. Ndinovimbisa kuti ini handizokubata ndichipesana newe neimwe nzira kana imwe. Ingogara uri pamberi-nevatengi vako (kana uinazvo). Kana iwe uchiti iwe unobheka kubva pakutanga uye bika kubva pakutanga. Kana iwe ukashandisa bhokisi, zvakanaka chaizvo kutaura kuti iwe unoshandisa 'makeke achangobikwa'.
Maitiro Ekugadzira Iyo Yakanyanya Yakachena Cake Recipe Kubva Kubva
Saka heino dhiri nechena keke mabikirwo. Kungofanana nezvinhu zvakawanda, kune nzira dzinopfuura imwe dzekukanda katsi… er… kubika keke.
Ndiani akatouya neshoko irori? Saka bizaar.
Saka zvakadaro, sezvandaitaura. Pane nzira dzakawanda dzekugadzira chena keke keke asi ini ndichaita kuti zviite nyore KWAURI. Sarudzo imwe ndeye tsika yekuvhenganisa yechinyakare yekumisikidza bota rako neshuga pamwe chete kusvikira mwenje uye nekubuda. Wobva wawedzera mazai ako machena kusvika zvasanganiswa. Wobva wawedzera mune yakaoma zvigadzirwa uye zvinwiwa. Iyi ndiyo nzira yandinoenda.
Iyo imwe sarudzo ndeye iwe kurova mazai ako machena kune yakapfava asi yakasimba peak. Ipapo iwe kirimu ruomba neshuga senguva dzose uye chinja yako yakaoma uye emvura zvinongedzo kusvikira zvabatanidzwa. Iwe unobva wapeta mumazai ako machena mubatter. Iyi nzira inoguma neyakareruka, yakaomesesa keke asi INOGONA kukonzeresa-kusanganisa.
Unogona kuyedza nzira mbiri uye kuona zvaunofarira zvakanyanya.
Rimwezve zano, ini ndinogara ndichiputira makeke angu vachiri kudziya. Putira mupurasitiki uye woisa mufiriji. Izvi zvinokiya mune hunyoro hwekeke. Kamwe kakatonhorera asi isina kuomeswa nechando, unogona kucheka machena machena kubva pekeke rako (sarudzo asi zvinoguma nechena chidimbu) uye chando nechakanaka chena buttercream kana chero chando chaunoda.
Ndinovimba inopindura yako yese inopisa mibvunzo nezve chena keke! Kana paine chimwe chinhu chandakarasikirwa, inzwa wakasununguka kundisiira komendi uye kana iwe uchida iyi yekubheka, ndokumbira ugovana uye ubatanidze kumashure kwandiri kana ukaishandisa uye ndingadai ndakuda iwe forevah<3
Unoda kudzidza zvakawanda nezve maitiro ekushongedza keke senge pro? Tarisa uone yangu YEMAHARA kudzidziswa pa kugadzira keke rako rekutanga nokusingaperi!
Iyo chena keke recipe iyo yakareruka, yakasviba, izere nekuravira uye nyore kuita! Iyo huru base recipe kune chero mubiki anogona kugadziridzwa kune mamwe mabikirwo. Iyi kamukira inogadzira batter yakakwana yemakeke maviri e8'x2 'akatenderera kana matatu 6'x2' makeke marefu Gadzirira Nguva:gumi neshanu mins Nguva Yakabika:28 mins Nguva Yese:40 mins Makorori:589kcal
White Cake Recipe Zvishandiso
▢14 oz (397 g) shuga
▢6 yakakura (6 yakakura) mazai machena nyowani isina kubhokerwa mukamuri temp
▢14 oz (397 g) AP hupfu
▢1 tsp (1 tsp) almond mushoma shandisa zvakajeka kwekeke jena
▢1 tsp (1 tsp) vanilla yakabudiswa
▢10 oz (284 g) mukaka imba temp
▢piri oz (57 g) mafuta ekubikisa
▢8 oz (227 g) pasteurized zai vachena tembiricha yekamuri
▢32 oz (907 g) unsalted ruomba tembiricha yekamuri
▢6 oz (170 g) chokoreti chena
▢1 oz (28 g) mvura inodziya
▢1 tsp (1 tsp) inodziya brown chikafu chevara
▢piri tsp (piri tsp) Chokwadi Mad Plastics super goridhe
▢1 Tbsp (1 Tbsp) Zvakare remon remvura kana rose mvura inogona kushandiswa
Chena Cake Recipe Mirayiridzo
Preheat oven yako kusvika ku335ºF uye gadzirira maviri 8'x2 'mapani ekeke nekeke goop kana imwe inodiwa pan kuburitswa.
Sanganisa mukaka, oiri uye zvinotsiviwa woisa parutivi
Sanganisa hupfu hwako, poda yekubheka uye munyu woisa parutivi
Isa bota mumuto musanganisi nepaddle yekubatanidza uye kirimu kusvika pakatsetseka. Fukidza mushuga yako wobva warega chikwapuro kumusoro kusvika pachiedza uye chena (anenge maminitsi mashanu)
Wedzerai mazai machena imwe panguva (zvinokwana) kumusanganiswa webhotoro muchisanganisa pazasi uye regai zvizere zvinyatsobatanidzwa mushure mekuwedzera kwekuwedzera usati wawedzera unotevera. Kana mazai ako machena asiri pane tembiricha yemukati iwe unogona microwave iwo kwemasekondi mashoma. Ive nekuchengera kuti usavabike! Kutonhorera mazai vachena vanozovhara iyo batter.
Wedzera mu 1/3 yezvakaomeswa zvako zvezai / bota musanganiswa uye sanganisa pazasi kusvika zvangosanganiswa. Wobva wawedzera mu2 / 2 yezvinwiwa zvako, wobva waoma, wozomwa uye zvimwe zvese zvako zvaoma. Rega kusanganisa kusvikira wangosanganiswa.
Wedzera batter mumakeke akagadzirwa uye gadzira pa335º F kwemaminetsi makumi maviri neshanu nemashanu kana kusvika gumbo rinobuda rakachena kana raturikwa pakati.
Rega kupora maminetsi gumi wozoburitsa makeke muchigadzirwa chinotonhorera. Putira inodziya uye isa mufiriji kuti upenye chill. Izvi zvinokiya muhunyoro. Kana uchinge watonhorera asi usina kuomeswa nechando iwe unogona kubva watsemura pamipendero yepepuru yemakeke ako nechando sezvakada. Chill keke.
Sungai mazai evachena uye neshuga yeupfu mumudziyo unosanganisa ne whisk attachment. Whisk kuti ubatanidze pazasi wobva whisk kumusoro, uchiwedzera muhotela yako mune zvidiki zvidiki, vanilla uye munyu. Shandura musanganisi kusvika kumusoro uye chikwapu kusvikira mwenje, fluffy uye chena.
Sungunusa chokoti nemvura mu microwave uye whisk kusvikira yakanyorova. Wedzera mumadonhwe mashoma echikafu chekudya. Rega kupora kusvika pamadhigirii makumi mapfumbamwe usati waedza kudonha pamusoro pekeke rakatonhora. Kana chokoreti yaiswa, unogona kusanganisa guruva rakajeka uye regoridhe kuti uite pendi uye penda iyo yekudonha.
* chitsamba: iri guruva regoridhe risina chepfu
Zvinhu Zvakakosha Kuti Ucherechedze Usati Watanga 1. Uya nezvinhu zvako zvose ku tembiricha yekamuri kana kunyangwe inodziya (mazai, buttermilk, batare, nezvimwewo) kuona kuti batter yako haiputse kana kupwanya. 2. Shandisa chikero ku pima zvigadzirwa zvako (kusanganisira zvinwiwa) kunze kwekunge zvarairwa neimwe nzira (Matipuni, mashupuni, pini nezvimwe). Metric zviyero zviripo mune yekubheka kadhi. Zviyero zvakaunganidzwa zvakanyatsojeka kupfuura kushandisa makapu uye kubatsira kuona budiriro yeresipi yako. 3. Dzidzira Mise en Nzvimbo (zvese zviri munzvimbo yacho). Edza zviyero zvako nguva isati yakwana uye wozvigadzirira usati watanga kusanganisa kuti uderedze mikana yekusiya chimwe chinhu netsaona. 4. Chill makeke ako usati watonhora uye kuzadza. Iwe unogona kuvhara keke yechando uye inotonhorera mune fondant kana uchida. Iri keke zvakare rakanakira kuisira. Ini ndinogara ndichichengeta makeke angu akaomeswa mufiriji ndisati ndasvitswa kuitira nyore kutakura. 5. Kana mabikirwo achida zvimwe zvinhu zvakaita seupfu hwekeke, kuchitsiva neupfu hwese hwechinangwa uye chibage chegorosi hazvikurudzirwe kunze kwekunge zvataurwa murutsva kuti zvakanaka. Kuisa zvinongedzo kunogona kukonzera kuti iyi nzira itadze.
Kushumira:1g|Makorori:589kcal(29%)|Carbohydrate:61g(makumi maviri%)|Mapuroteni:4g(8%)|Mafuta:37g(57%)|Mafuta Akaguta:2. 3g(115%)|Cholesterol:89mg(30%)|Sodium:125mg(5%)|Potassium:111mg(3%)|Shuga:makumi mashanug(56%)|Vhitamini A:1100IU(22%)|Calcium:55mg(6%)|Iron:0.9mg(5%)
Strawberry keke uchishandisa yero keke sanganisa
maitiro ekushandisa chando pakeke
chii chinonzi fondant chakagadzirwa
maitiro ekurapa keke musanganiswa